Doorashooyinka Puntland: Himilooyin Raagey iyo Hogaamiyaha xaqiijin kara!!
Waxaan shaki ku jirin in himilooyinkii waaweynaa ee aay sugayeen shacabka Puntland gaar ahaan dadka indheergaradka ah tobankii sano ee maamulkaasi dhisnaa aay noqdeen hal bacaad lagu lisey.himilooyinkaas oo aay ku fashilmeen sadexdii hogaan ee Puntland madaxtinimadeeda iskaga danbeeyay, iyagu haba kala saami badsadeene,laakiin waxaa marag ma doonto ah in dhamaantood midna uusan xil iska saarin xaqiijinta himilooyinkaas.
Arintaasi uma baahna sharaxaad badan oo 10 sano kadib halka aaynu marayno iyo sida aay wax yihiin waxaa aqoonsan guuldaradaas cid walba oo garasho leh,xitaa ragii maamuladaas ku jiray qaar ka mid ah ayaa maanta ku tiraabaya inay guuldareysteen inkastoo aay noqotey isku tuur tuur.
Dhismihii Puntland waxaa hubaal ah inuu degaamadii laga taagay dhaxalsiiyey midnimo siyaasadeed isagoo maamulkaasu mideeyay heykalkii siyaasadeed ee goboladii dhistay. Taasoo aay uga badbaadeen tobankii sano ee uu dhisnaa calamo siyaasadeed oo laga kala taago degaamadii kala duwanaa taasoo hadey dhici lahayd horseedi lahayd xarig jiid aan dhamaan oo dhiig badani ku daato sida ka dhacday meelo badan oo somaliya ka mid ah.
Waxaa soo dhawaaday waqtigii la dooran lahaa madaxweynaha cusub ee Puntland waxaa durba kaararka soo dhiibtay rag door ah oo dhamaantood sheeganaya inay gayaan xilkaas.
Waxaase nasiib daro noqotay in shacabka iyo dad badan oo indhaha ku haya xaaladaan kalaguurka ahi aay ku wareersan yihiin kala xulida iyo go,aan gaarista ku saabsan musharaxiinta iyo kan ugu mudan maanta in lagu aamino xilka dadka iyo dalka. Sababta jaahwareerkaas waxaa ugu weyn saxaafad wacyigalineed oo aan ka jirin Puntland.
Qormooyinkaani waxay isku dayayaan inay u iftiimiso shacabka tilmaamaha aay ku kala reebayaan musharaxiintaas. Anagoo ka duulayna aragti ah in dhamaan reer Puntland isku raacsan yihiin maanta inay helaan hogaan daacad ah oo wax ka qabta dhibaatooyinka muga leh ee haysta shacabka. Kaasoo hadii aaysan dhicin maanta ku noqonaysa aayaha dadka reer puntland ismiidaamin siyaasadeed (political Suicide) oo khatar galin doonta jiritaankooda.
Qormadu waxay ka kooban tahay sadex madax oo kala ah:
Maxay yihiin himilooyinka raagay ee shacabka Puntland??
Maxay yihiin tilmaamaha akhlaaqeed, shakhsiyadeed iyo aqooneed ee qofka xaqiijin Kara himilooyinkaas.
Himilooyinka raagay ee shacabka Puntland
Himilooyinka raagay ee Puntland waxaan kusoo uruurinaynaa qodobadaan:
Dhisida nidaam dowladeed oo adag kaasoo sharcigu u sareeyo islamarkaana leh jaranjarodii dowladnimo, isa-saxid iyo is-dheelitir(checks and balances)
Dhismaha ciidan qaran qaybihiisa kala duwan kaasoo leh haybadii iyo asluubtii ciidan loogana seexdo amaanka gudaha iyo kan dibada.
Wax kaqabashada arimaha bulshada sida waxbarashada,caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaaleha sida wadooyinka,biyaha iyo korontada.
Dhismaha nidaam cadaaladeed (Maxkamadaha) oo lagu kala baxo.
In laga iibgeeyo Puntland beesha caalamka,shirkadaha iyo heyadaha si taasi aay u maalgashadaan Puntland. In la baadi goobo taageero dhaqaale iyo mid dib-u dhis oo gobolku helo.
Maxay yihiin tilmaamaha qofka xaqiijin Kara himilooyinkaas:
Hadaan ogaanay himilooyinka raagay ee shacabka Puntland kuwaasoo looga fadhiyo ninka hanta xilka madaxweynimo ee Puntland waxaa markiiba soo baxaysa maxay yihiin tilmaamaha musharaxa lagu aaminayo xaqiijinta himilooyinkaas raagay??
Waa badan yihiin sifooyinkaas waxanse kusoo uruurinaynaa sideed sifo ama tilmaamood oo aay isku raaceen boqol khabiir oo ku takhasusey taariikhda madexweynayaasha dunida. Tilmaamahaan waa kuwo saldhig ah u ah shakhsiyada dhamaan madaxweynayaasha loo qirey inay ahaayeen halyeeyo dhulka ka qaaday dowladahooda.
Tilmaamaha aan xooga saareyno waxaan ku dhisaynaa tijaabooyinka laga dhaxgalay ilbaxnimada dowladaha aduunka iyo madaxdii soo martay.
1) Howlkar(Hardworking): Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanayso kuwiisii la fiiriyaa ninka maareynaya mustaqbalka umadu waa inuu yahay marka hore nin maareeyay noloshiisa shakhsiga ah,midiisa xirfadeed iyo tiisa aqooneed intaba. Waa inuu yahay nin leh sooyaal wax-qabad qofeed (Personal Achievement record), waa inaay jiraan tusaalayaal cadcad oo aan laba ku murmayn oo muujinaya guulo wax-qabad oo hufnaani ku dheehan tahay,ama guulo barnaamijyo mujtamaca dhaxal gal u ah oo uu yagleelay.
Madaxweynaha qowjada ahi waa nin leh howl-gudasho uu ku gaaro himilooyinka umadiisa. Waxaa ka mamnuuc ah xilkaan in loo dhiibo nin doonaya inuu mustaqbalkiisa ku dhiso xilkaan,waa inuu yahay ninka xilkaan qabanayaa nin hadii uu waayo ka maarma oo aan naf-lacaari u ahayn oo leh xirfado iyo shaqooyin kale oo uu ku noolaado.
2) Alle Yaqaanimo (Traditionalist): Hogaamiyaha Puntland u baahan tahay waa nin Alle yaqaana,oo aan lagu xamanayn inuu bil-ramadaan aaysan u dhalan ama salaad aaysan is-aqoon,hogaamiyaha dhabta ahi waa midka ixtiraama mabaadiida iyo akhlaaqiyaadka umadiisa islamarkaana aan ku kicin waxyaabo gaf ku ah diinta umada iyo dhaqankeeda.
Rabi aqoontu waxay ninka madaxda ah marar badan ku riixeysaa inuu xeeriyo aakhiradiisa iyo qiyaamaha xisaabta sugaysa,iyadoo ku dhalinaysa daacadnimo iyo hufnaan,tani waxay noqonaysaa in qofka damiirkiisa diiniga ahi u diido khiyaamooyinka,eexda iyo dulmiga.
3)Geesinimo(Courage): Madaxweynahu waa inuu leeyahay geesinimo ama dhiiranaan si uu uga guuleysto cabsida iyo werwerka talaabooyinka uu qaadayo,masuuliyadu waa go,aan gaaris(decision making) taasna waxay u baahan tahay geesinimo hadii aay ku kalifto uu diyaar u yahay inuu keligiis qaado toobiyaha marka aay ka haraan saaxiibadiis.
hogaamiyaha adagi waa midka isku dara farsamooyin,dulqaad iyo hadba qaab ku dayid si uu u gaaro waxii maslaxada guud ee umadiisu ku jirto si kasta oo looga horyimaado.
Halkaan waxaa ku haraya nin jilicsan oo dhan, kaas oo la badali karo ama duruufaha qalafsan ee horyaala ka jeedin karaan gaarista ujeedooyinka loo asteeyay ama qof aan lahayn dhamaystir shaqo oo wax walba iyagoo qabyo ah ka tagaya.
Qodobkaani waxaa la isku raacsan yahay inuu saldhig u yahay guusha madaxweynaha waayo go, aamada madaxtooyooyinku maahan in badan kuwo sacab iyo mashxarad lagu soo dhaweeyo marar badan waay xanuun badan yihiin waxayna u baahan yihiin iraado weyn iyo jabaarad aan la waabin Karin,hadii aad u fiirsatid dhamaan dowladaha horumarey waxaa u hanaqaaday hogaamiyayaal bir ah oo soo jeexsiiyey surimo ciriiryoon.
4) Miskax furan(Open minded): Hogaamiyaha dhaxalgalka ahi waa inuu yahay mid miskax furan, oo leh dareen soo jeeda islarmarkaana si dhab ah u dhagaysta talooyinka dadka indheer garadka ah, hadiise aay dhacdo inuusan cidna dhagaysan waa mashaqo waxaase iyaduna masiibo ah haduu dhagaysto dad maan-gaab ah oo aan mudnayn in laga tala galiyo ayaaha umada.
Hogaamiyaha Puntland u baahan tahay waa nin maala talooyinka iyo fikradaha xulka ah ee waxgaradka islamarkaana u samaysta golayaal iyo kanaaladii talooyinkaas uu ku heli lahaa. Waxaan u baahanahay masuul dhagaysta dhamaan fikradaha meelmarka ah ee qaybaha kala duwan ee shacabkiisa ee aan u dhegafurnayn kaliya koox gaar ah oo aay kala dhexeyso dano siyaasadeed,qabiil ama dhaqaale.
5) Hal abuur- Aqooneed (Intellectual ability): Hogaamiyaha dhaxal galka ahi waa inuu leeyahay karti aqooneed/garasho oo sareysa (Superior Intellectual ability) taasoo hordhac u ah guul madaxnimo, hogaamiyehu waa inuusan ahayn caamay. Madaxweyne caamo ahi horumar umadeed ma keeni karo inta uu caamanimada kabaxayo ayaa dal iyo dad baaba,ayaan. Haduu damco inuu madaxtooyada dhexdeeda caamonimada kaga baxana waa masiirkii umadda oo galay iskoolwiido.
Bal u fiirso madaxweynayaasha iyo hogaamiyayaasha la sheego waxqabadkooda kuligood waa dad leh hal abuur aqooneed sida Dr.Mahatiir Mohamed waa dhakhtar, dhaqaale-yahan iyo faylasuul. Abraham Lyncon waxuu ahaa lawyer bir ah faylasuuf, Mahatma Gandhi lawyer faylasuuf, Nelson Mandela Laywer faylasuuf.
6)Hadal Cadaan(Assertiveness): Hogaamiha culusi waa inuu yahay nin waxa uu qabo muujin kara islamarkaana diidi kara waxii uu u arko inaysan qaban,marar badan masuuliyadu waxay keenaysaa in qofku uu MAYA karo,ama uu gacan adag ku qabto cida ku ciyaareysa masaalixda ummada xitaa haduu ka tirsan yahay dowladiisa iyo xafiiskiisa intaba.
Hogaamiyaha raba inuu cid walba qanciyo oo aaysan cidna isku dhicin waxuu ku tumanayaa masaalixda guud,mar walba hab maamuuska iyo diplomaasiyadu waa qayb ka mid ah qaamuuska siyaasada laakiin marka aay timaado danaha umada,dowladnimo wanaaga iyo dhowrista sharciga hadalka cad waa sad laga doonayo hogaamiyaha.
7) Aftahan(Speaker): Hogaamintu waxay ka unkantaa hadal aqoon,madaxweynuhu waa inuu noqdaa Aftahan ,xikmaawi suugaanta dugsada,nin hadalkiisu abuuro xiiso iyo dareen- soo jiidasho,waa in uu noqdaa nin hadalka xubinta kaga aadan yaqaana islamarkaana aan lahayn dhacdhac,hadaladiisu waa inay yihiin kuwo dadkiisa mideeya ee aan kala fogeyn. Hadalkiisu waa inuu umada wada gaaro, islamarkaana uu leeyahay luqad nin dowladadeed (statesman).(Obama maxuu ku qabsaday Maraykan!!!)
8) Adkaysi- weyn (Tolerance): Madaxweynayaasha guulaystaa waa kuwo leh adkaysi, dhabar adayg aay ugu babac dhigaan masiibooyinka iyo mashaqooyinka ku xeeran shaqadiisa. Waxaan shaki ku jirin in xilka madaxweyninimo uu leeyahay culeys miskaxeed oo aad u baaxad weyn sidaas darteed waxaa lama huraan ah inuu leeyahay hogaamiyahu dulqaad hibo ah iyo acsaab adag.
Waxaa kursigaan ka reeban nin daciif ah, nin fud-fudud ama nin aan lahayn deganaan uu wax ku hubsado. Ninka jilicsan ee masuuliyadaan gorada la galaa waxuu noqonaya labo midood inuu naftiisa haligo oo cuduro xumi ku dhacaan(cudurada casrigaan dadka dhameeyay oo kansarku ugu horeeyo waxaa laga qaadaa culeys miskaxeed ama Stress-ka waxa loo yaqaano) iyo inuu umadda aayaheeda meel xun ka tuuro.
Sideedaan sifo afarta hore waa tiirarka hogaamiyaha dhabta ah,oo la,aantood hadii qofka laga waayo aay xaqiiqo tahay inaan laga sugin xaqiijinta himilooyinka shacabka Puntland, afarta sifo ee soo hartay waxaa khasab ah inuu boqolkiiba 50% ka haysto hadii uu ka hoos maro waa adag tahay inuu noqdo hogaamiye macno leh.
Lasoco qaybta hartay odoros siyaasadeed
Sharmarke Xusen Yusuf
Afeef:Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan